प्रदेशकै ठूलो अस्पताल जुम्लामा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
माघ २४, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
जुम्ला — जुम्लामा ६ प्रदेशकै सुविधासम्पन्न ठूलो अस्पताल बनेको छ । तीन सय शय्याको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माण पूरा भएको हो । ७६ करोड रुपैयाँको लागतमा अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
माघ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण हुने र सेवा आरम्भ गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सेवा प्रवाहमा प्रतिष्ठान लागिपरेको शिक्षण अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.पूजन रोकायाले बताए । ‘अब शय्या अभावमा बिरामी अहिलेझै भुइमा बस्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘उपचार अभावमा जिल्लाबाहिर जानुपर्ने अवस्था आउने छैन ।’
तत्कालीन उपकुलपति डा. पारशकुमार आचार्य र रजिष्ट्रार श्याम लम्सालले ३५ महिनाभित्र अस्पताल निर्माण गरिसक्ने योजना बनाएका थिए । सोहीअनुरूप समयमै निर्माण जिम्मा लिएको कम्पनीले अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने लागेको हो । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा अनुसन्धानसमेत गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले कर्णालीका स्थानीयवासीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे समेत अनुसन्धान गरिरहेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रोजेन्द्रराज वाग्लेले वताए । ‘कर्णालीको मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा स्वास्थ्य अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र पिछडिएका ९ जिल्लामा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा केन्द्रित हुनेछ ।’ कर्णालीवासीको औसत आयु ३६ वर्ष मात्रै छ । कर्णालीका ५५ हजार घरपरिवारको स्वास्थ्य सर्भेक्षण गर्ने लक्ष्यअनुरूप प्रतिष्ठानले जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाको स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिसकेको छ । अब कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको समेत स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तयारी गरिरहेको छ ।
विपन्न र द्वन्द्वपीडितलाई नि:शुल्क उपचार
शिक्षण अस्पतालले विपन्न वर्ग र द्वन्द्वपीडित बिरामीहरूलाई नि:शुल्क उपचार सेवा दिइरहेको छ । यसअघि द्वन्द्वकालका घाइते र पीडितहरूले उपचार नपाउँदा निकै सास्ती बेहोरिरहेका थिए । अस्पतालमा उपचार गराउन आउने द्वन्द्वपीडितको हकमा यातायात र वास खर्च उपलब्ध उपलब्ध गराइने अस्पतालले जनाएको छ । प्रसूति तथा स्त्रीरोग, हाडजोर्नी तथा नशा, आँखा र रेडियोलोजी लगायतको सेवा विपन्न बिरामीका लागि नि:शुल्क उपलब्ध गराइरहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले वताए ।
प्रतिष्ठानले कर्णालीमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । बिस्तारै ६ नम्बर प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ । शिक्षण अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक डा.प्रविनकुमार गिरीलाई क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा सेवा विस्तारका लागि पठाइएको छ । कुनै बेला पोस्टमार्टमका लागि डाक्टर नपाएर छिमेकी जिल्ला तथा नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट बोलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले दुर्गमको अस्पतालले सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पताललाई समेत चिकित्सक उपलब्ध गराइराखेको छ । शिक्षण अस्पतालले डोल्पा जिल्लामा एमडीजीपी अनुप मंगल समाल, सुर्खेतमा एनएसथेसियाजिस्ट डा. प्रवीण गिरी, जाजरकोटमा स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. राजीव शाह र हुम्लामा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. मंगल रावललाई खटाएको जनाएको छ । यही महिनाबाट कालिकोट जिल्लामा समेत विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको छ ।
तीन सय शय्याको अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रतिष्ठानले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए । प्रतिष्ठान जुम्लाले एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी थालिरहेको छ । प्रतिष्ठानले नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा ल्याएर स्टार्फ नर्सको पढाइ भैरहेको जनाएको छ भने हेल्थ असिस्टेन्टको तेस्रो ब्याजको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । स्नातक तहका कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा.धर्मराज श्रेष्ठले बताए । तीन सय शय्याको अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि मेडिकल कलेज र एलाइड कलेज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानले जुम्लामा डाक्टरी पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि जिल्लामा रहेका माध्यमिक विद्यालयहरूले ‘प्लस टु’ मा विज्ञान संकायको पढाइमा जोड दिन थालेका छन् । चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयले अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गरी विज्ञान संकायमा जोड दिइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंक महतले बताए । प्रतिष्ठानले चिकित्सक पढाइमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी कोटा पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै २० प्रतिशत विद्यार्थीले नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेछन् भने २० प्रतिशलेले आशिंक छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
शिक्षण अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.पूजन रोकायाले जुम्लाको मौसमका दृष्टिकोणले १२ महिना शल्यक्रिया गर्न उपयुक्त रहेको बताए । शल्यक्रिया गरेका घाउहरू चिसोमा चाँडै निको हुने भएकाले पनि भविष्यमा बिरामीहरू शल्यक्रिया गर्न जुम्ला आउने उनको भनाइ छ । अहिले जुम्लामा हड्डी सम्बन्धीका सबै जटिल शल्यक्रिया ल्याप्रोटोमी, पेट चिर्नेे, एपेन्डिसाइटिस, सिजेरोयनमार्फत बच्चा निकाल्ने शल्यक्रियाको सुविधा छ । जुम्लामा बच्चा, सालनाल अड्किएर आमाको मृत्यु हुने समस्याको हल भएको छ ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ११:४५
माघ २४, २०७४ विप्लव महर्जन
सल्यान — कृष्ण आधारभुत विद्यालय खहरेखोलामा तीन शिक्षकको दरबन्दी छ । विद्यालयमा २० जना मात्र विद्यार्थी छन । गंगा प्रावि अम्रामा १६ जना विद्यार्थी छन् । यी दुई मात्र नभई जिल्लाका अधिकांश आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ ।
शिक्षकहरू नियमित विद्यालयमा उपस्थित नहुनु, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु, अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको पढाइप्रति रुचि नराख्नुलगायतका कारण बालबालिका घट्दै गएको त्रिभुवन जनता मावि च्युराका अध्यक्ष हरिलाल विष्टले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ६० जना विद्यार्थी थिए । अहिले २० भन्दा बढी विद्यार्थी नियमित आउँदैनन् । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले पठनपाठनसमेत लथालिंग बन्दै गएको उनले स्विकारे । शिक्षकको राजनीतिमा बढी रुचि हुनु, पठनपाठनमा ध्यान नदिनुलगायतका कारण पढाइ खस्कँदै गएको देवस्थलका गुञ्जमान बुढाले बताए ।
सामुदायिक जिद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको अभिभावक बताउँछन् । एक शिक्षक बराबर पहाडी जिल्लामा ४५ जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता भए पनि अहिले अधिकांश विद्यालयमा एक शिक्षकको भागमा ५/१० विद्यार्थी मात्र पर्ने गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले पाँच विद्यालय समायोजन गरेको र अझै २० बढी विद्यालय समायोजन गर्ने अवस्थामा रहेका उनले जानकारी गराए । जिल्लामा २ सय ८० आधारभूत विद्यालय छन् । तीमध्ये ५० बढी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या धेरै कम भएको उनले बताए । हाल ५८ विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । शिक्षानियमावलीअनुसार २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १ सय ९२ दिन पढाइ भएको देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने र नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबले सफल हुन नसकेको उनले बताए । अभिभावकले सानैदेखि बालबालिकालाई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन खोजेकाले निजीमा भर्ना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
शैक्षिक अवस्था कमजोर हुन नदिन स्थानीय तहका प्रमुखसँग बसेर शिक्षाको बारेमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी भाषा र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ११:४४
पासागाड पुल ५ वर्षदेखि अलपत्र